आँखा (Eyes) : आँखाले कसरी काम गर्छ ? How the Eyes Work in Nepali
आँखा (Eyes): आँखा संसारमा भएको हरेक कुराहरुलाई देख्न सक्दछ. आँखा नहुँदा हामी संसारको कुनै पनि कुराहरुलाई देख्न सकिन्न. आँखाले कसरी देख्न सक्छ ?
हाम्रो आँखाले संसार मा भएको हरेक कुराहरुलाई देख्न सक्दछ मतलब हामि यो संसार मा भएका हरेक वस्तुहरु देख्ने गर्दछौं । यदि हाम्रो शरीर मा आँखा नभएको भए हामी संसार को कुनै पनि कुराहरुलाई देख्न सक्दैन थियौं तर के हामीले कहिले सोचेका छौँ कि हाम्रो आँखाले कसरी देख्न सक्दछ ? यसको वास्तविक कारण यस्तो रहेको छ ।
जब यो ब्रमाण्ड मा सुर्य को प्रकाश पर्दछ तबं उक्त सुर्य को प्रकाश ब्रमाण्ड हुदै हाम्रो आँखा सम्म पुग्दछ । अब हाम्रो आँखामा सुर्य को प्रकाश परे पछी आँखामा भएको लेन्स ले उक्त प्रकाश को किरणलाई एक संकेत को रुपमा हाम्रो मस्तिस्क सम्म पुर्याउदछ ।
तर यदि अध्यारो छ वा कुनै पनि प्रकाश छैन भने हाम्रो आँखामा कुनै पनि प्रकाश को किरण पर्न सक्दैन जसको कारण मस्तिस्क मा हाम्रो आँखा बाट प्रकाश को सिग्नल पुग्न सक्दैन र हामि अध्यारो मा के हि देख्न सक्दैनौं ।